Ilhaan Cumar iyo Xildhibaanno kale oo dacwad ka gudbiyay Askar fal xun kula kacay Dad Muslimiin ah. | Dooxo Diaspora Forum - Golaha Qurbo Joogta Dooxa
Home Articles Ilhaan Cumar iyo Xildhibaanno kale oo dacwad ka gudbiyay Askar fal xun...
Ilhaan Cumar iyo Xildhibaanno kale oo dacwad ka gudbiyay Askar fal xun kula kacay Dad Muslimiin ah.
Xildhibaanno ka tirsan Aqalka wakiillada Dalka Marayka oo ay ka mid tahay Ilhan Cumar ayaa dacwad ka gudbiyay ciidamada ka hortagga qaxootiga iyo kuwa canshuuraha, kadib markii ay Dad Muslimiin ah oo xabsi ku jira ay ku qasbeen in ay cunaan Hilib Doofaar iyo raashiin qurmay.
Dacwadda oo ay Xildhibaannadu u gudbiyeen Waaxda amniga gudaha Dalka Maraykanka ayay kaga codsadeen in baaritaan lagu sameeyo dhacdadaan foosha xun ee lagula kacay Muslimiinta maxaabiista ah ee ku jira xabsi ku yaalla Magaalada Miami.
War-saxaafadeed ay si wadajir ah ugu saxiixnaayeen Xildhibaanada kala ah Ilhan Omar, Rashida Tlaib iyo Andre Carson ayaa lagu sheegay inaysan arrintaani ahayn wax aan la aqbali karin.
Maxaabiis Muslimiin ah oo ku jira xabsiga Krome ee Magaalada Miami ayaa lagu khasbay inay kala doortaan Hilib Doofaar iyo Raashin qurmay, sida ay sheegeen Xildhibaannadan.